China Readymade Vetical blind blind Exersers and Company | ETEX
Vindical Blinds bụ windo ọdịnala kachasị ewu ewu. Ya na ọrụ nke ikpochapu na idozi ya. Dabere na ụdị ihe eji emepụta ihe dị iche iche, Vetikal Blind bụ nhọrọ kachasị ewu ewu ma dị mfe dakọtara na mkpa gị.
Mbara: 89/100 / 127mm Vane
Sistemụ: Sịnụ / Wand Sistem
Nhazi akwa: Plain, Jacquard, Blackout, FR ..
Aluminom: Mpekere, Square, High, Low Track
Igwe anyị kwụ ọtọ mechiri ụlọ. Ha na-enyere aka ịchekwa nzuzo, na-ahazi ọnọdụ okpomọkụ, ma na-egbochi ìhè na-egbuke egbuke ịbanye n'ime ụlọ ahụ. N’ezie, oghere anyị na –emechi emechi ka ọ dị mma maka ime ụlọ ebe anwụ ga - akpọte gị n’oge, ma ọ bụ kwụsị ụmụaka ịrahụ ụra n’abalị.
Igwe kpuchie bụ ụzọ dị mma isi chekwaa oghere ma mepụta ahịrị ndị dị ọcha, nke ọhụụ n’ime ụlọ ọ bụla. Anyị vetikal blind na-abịa n'ụdị dịgasị iche iche nke eke agwakọ agwakọ agwakọghị nke ọma na ime ime gị ka ị na-agbakwunye imecha gị na windo gị. Ndi nwere ahihia na-acha aja aja na-ewu ewu ugbu a, ha na ndi nwere ndi ozo. Colorscha ndị a na-anọpụ iche na-arụ ọrụ nke ọma n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla yana ụdị ihe ndozi ọ bụla.
Ezigbo maka ụdị windo dịgasị iche, site na windo ọkọlọtọ ruo ọnụ ụzọ patio na windo French, ndị ìsì anyị kwụ ọtọ na-abịa n'ọtụtụ mbara na ọdịda. Ma ọ bụ maka nchekwa akwụkwọ gị, ma ọ bụ na ị na-achọ windo blinds maka windo bay, ị ga-ahụ ihe ịchọrọ na Dunelm. Anyị n’akọkwa ọtụtụ nhọrọ nke kpuchie anya n’ọtụtụ ihe. Anyị akwa vetikal blinds bụ ndị kasị ewu ewu anyị, ma plastic, metal na osisi vetikal blinds nwekwara dị.
Ọ dị mfe ilekọta:
Emepụtara site na polyester ma dị n'ọtụtụ agba - gụnyere ọcha, ude na isi awọ anyị kpuchie ìsì dị mfe iji dozie. Naanị were ite dị nro hichaa ma ọ bụ hichaa ya ọcha iji weghachite windo vetikal gị nke ọma. Nke a na-eme ka ha dị mma dịka ikpu kichin, ebe enwere ike ihichapu ma wụfuo dị mfe. Metal osisi kwụ ọtọ mechiri emechi na-arụkwa ọrụ siri ike na ndozi dị ala.
First Nchedo mbụ:
Maka ụlọ ezinụlọ, ọ dị mkpa ịghọta nchebe mkpuchi, karịsịa na ebe ụmụaka na-eji ya eme ihe. Ndị ọkachamara na-eji ejiji akwa windo nwere ike inye ndụmọdụ maka ndị kachasị gị maka ìsì, yana ịkọwa mkpa ngwaọrụ ngwaọrụ nchekwa.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara ịwụnye blinds veti n’ụlọ gị nke ọma, gụọ akwụkwọ ntuziaka anyị. Maka ozi ndị ọzọ gbasara akwa windo, biko lee ndị ndụmọdụ ndụmọdụ ọkachamara. Chọọ n ’ihu mkpuchi zuru oke nke ịchọpụta ma chọpụta ebe dabara adaba maka ụlọ gị.
Age Vetical blinds Use Us:
Nleghari anya na ogwe ndị ọzọ na Café, School, Home, Comercial Ebe, ụlọ ahịa, ụlọ, ụlọ ọgwụ na ebe obibi ndị ọzọ. Onye na-eme mkpuchi na-emechi anya na-ejikwa ime ma ọ bụ na mpụga. Dabere na nhọrọ na-adịghị agwụ agwụ nke ihe ndị a na-ahụ anya na sistemụ.
Nke gara aga: Ndị Venetian Blinds
Osote: Readymade Zebra blind